Hetezo voninkazo izay malazo - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-03 > Hetezo ny voninkazo malazo
Ny vadiko vao haingana dia nanana olana ara-pahasalamana madinidinika, izay midika hoe fandidiana ao amin'ny hopitaly amin'ny andro iray marary. Vokatr'izany dia nandefa fehezam-boninkazo tsara tarehy ny zanakay efatra sy ny vadiny. Miaraka amin'ny bouquets mahafinaritra efatra, ny efitranony dia toa mitovy amin'ny fivarotana voninkazo. Saingy taorian'ny herinandro teo, maty avokoa ny voninkazo rehetra ary nariana ireo. Tsy fitsikera ny manome fehezam-boninkazo misy voninkazo marevaka fotsiny fa vao maika manary ny voninkazo. Manamboatra fehezam-boninkazo ho an'ny vadiko aho isaky ny andro fampakaram-bady. Saingy rehefa voapaina ny voninkazo ary tsara tarehy mandritra ny fotoana fohy, dia mihantona amin'izy ireo ny sazy fanamelohana ho faty. Tahaka ny endriny sy ny halavany no mamelana, dia fantatsika fa malazo izy ireo.
Toy izany koa eo amin'ny fiainantsika. Avy amin'ny fotoana nahaterahantsika dia mizotra lalan'aina izay hiafara amin'ny fahafatesana isika. Fahafatesana no iafaran'ny fiainana. Mampalahelo fa misy olona tanora sasany maty, saingy manantena fiainana maharitra sy mamokatra isika rehetra. Na dia mahazo telegrama avy amin'ny Mpanjakavavy amin'ny faha-100 taona nahaterahany aza isika dia fantatsika fa ho avy ny fahafatesana.
Tahaka ny fanomezana voninkazo sy famirapiratana mandritra ny fotoana voafetra ny voninkazo dia afaka mankafy fiainana mahafinaritra. Afaka mankafy asa tsara isika, miaina trano tsara tarehy ary mitondra fiara haingana. Mandritra ny fiainantsika dia afaka manana fiatraikany marina amin'ny mpiara-belona isika ary manatsara sy mampitraka ny fiainany amin'ny fomba mitovy amin'izany toy ny ataon'ny voninkazo amin'ny ambaratonga kely kokoa. Fa aiza ny olona izay nahary izao tontolo izao roanjato taona lasa izay? Ny lehilahy sy vehivavy lehibe teo amin'ny tantara dia miloko tahaka ireo voninkazo voamaso ireo, toy ny an'ny lehilahy sy vehivavy mahavariana ankehitriny. Mety ho anaram-pianakaviana amin'ny fiainantsika isika, fa iza no hahatsiaro antsika rehefa mihena ny tantaran'ny fiainantsika?
Ny Baiboly dia milaza fanoharana momba ny voninkazo voapaika: «Satria ny nofo rehetra dia ahitra ary ny voninahiny rehetra dia tahaka ny ahitra. Malazo ny ahitra ary latsaka ny voninkazo » (1 Petera 1,24). Fieritreritra mahaliana momba ny ain'olombelona izany. Rehefa namaky aho dia tsy maintsy nieritreritra. Inona no tsapako rehefa mankafy ny zavatra atolotry ny fiainana ankehitriny aho ary fantatro fa amin'ny farany dia hanjavona ao anaty vovoka toy ny voninkazo voazo aho? Tsy mahazo aina izy. Ahoana ny momba anao? Mino aho fa mety mahatsapa toy izany koa ianao.
Misy fomba iray hialana amin'ity fiafarana tsy azo ihodivirana ity? Eny, mino ny varavarana misokatra aho. Hoy i Jesosy: «Izaho no varavarana. Raha misy olona miditra amiko, dia ho voavonjy izy ireo. Hiditra izy ka hivoaka sy hahita ahitra tsara. Ny mpangalatra dia tonga hangalatra sy mamono ondry ihany ary haharingana. Fa tonga mitondra azy ireo aho - fiainana amin'ny fahafenoana » (Jaona 10,9-10).
Nanazava i Petera fa mifanohitra amin'ny tsy fahatomombanan'ny fiainana dia misy teny mijanona ho mandrakizay: «Fa ny tenin'ny Tompo kosa dia maharitra mandrakizay. Izany no teny efa nambara taminao » (1 Petera 1,25).
Vaovao mahafaly, vaovao mahafaly izay notorin'i Jesosy ary maharitra mandrakizay izany. Mety manontany tena ianao hoe, inona no vaovao tsara? Azonao atao ny mamaky izao vaovao tsara izao amin'ny ampahany hafa amin'ny Baiboly: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino dia manana fiainana mandrakizay" (Jaona 6,47).
Ny molotr'i Jesosy Kristy ireo teny ireo. Izany no fampanantenam-pitiavana andriamanitra izay mety ho tianao foanana ho toy ny angano na tsy nihevitra ho sarobidy akory aza. Rehefa mieritreritra ny safidy hafa ianao - ny fahafatesana - inona no vidin-tsoa ho anao amin'ny fiainana mandrakizay? Inona ny vidin-tsain'i Jesosy? Minoa! Amin'ny alàlan'ny finoana an'i Jesosy izay ifanekenao amin'Andriamanitra ary ekenanao ny famelana ny fahotanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary raiso ho mpanome ny fiainanao mandrakizay Izy.
Amin'ny manaraka dia nanapaka voninkazo mifamatotra amin'ny fehezam-boninkazo iray ao amin'ny fivarotana voninkazo ianao, tadidio raha te ho velona fiainana fohy fohy ianao na raha mendrika hitranga ilay varavarana misokatra amin'ny varavarana mankany amin'ny lalana mandrakizay. Handeha ny fiainana!
by Keith Hartrick